Budata The Witcher 3 First Person Mode maka Windows
Budata The Witcher 3 First Person Mode
Budata The Witcher 3 First Person Mode,
Ọnọdụ onye mbụ Witcher 3 bụ otu nime mods etolitere maka egwuregwu onye na-agba ụta nke atọ Onye Witcher 3. Mepere NexusMods maka nbudata nefu, The Witcher 3 Onye Mbụ Mod, dị ka aha ya na-egosi, na-eme ka o kwe omume igwu egwuregwu ahụ site na igwefoto onye mbụ. Ị nwere ike budata ụdị ngwa ngwa Witcher 3 ọhụrụ, nke na-enweghị ahụhụ dị na ụdị igwefoto mmadụ mbụ gara aga (Onye mbụ na modFirstPerson), na-akwụghị ụgwọ ma tinye ya na kọmputa gị.
Ọnọdụ onye nke mbụ na-agbakwunye nhọrọ igwefoto onye mbụ na-emikpu nime egwuregwu nke enwere ike rụọ ọrụ ma ọ bụ gbanyụọ, na-enye gị ohere pụrụ iche iji hụ Geralt nụwa. Moddị a na -eme ka ọ dị mfe ijikwa na idozi ụfọdụ nsogbu dịka iji mma agha, ngosi crossbow, mgbanwe igwefoto, mmuo Witcher noge omume dị iche iche (dịka mwakpo, ịgba ọsọ).
Budata Witcher 3 Mod nbudata
Wepụ faịlụ archi mod na mgbọrọgwụ nke folda egwuregwu.
Tinye ahịrị C: Ndị ọrụ aha njirimara gị Documents \_ The Witcher 3 \_ input.settings na faịlụ add_to_inputsettings.txt, nke ọ bụla na mbido nke ya.
Jiri njikota edemede ma ọ bụrụ na etinyere mods ndị ọzọ.
Malite egwuregwu. Gaa na ntọala ntọala mod - Mods - egwuregwu egwuregwu wee pịa ## PRESET_VALUE_DEFAULT nelu.
Ịnwekwara ike mee ka nlele nke mbụ dịrị na mkparịta ụka na ntọala mana ọ na -arụ ọrụ nke ọma.
Ọnọdụ onye mbụ Witcher 3 dị mfe iji. Iji gbanye/gbanyụọ mod, pịa igodo P.
The Witcher 3 First Person Mode Ụdịdị